अलिकति समय दिनुस्, विश्वास मर्न दिँदैनौं : मिलन पाण्डे [अन्तर्वार्ता]
२o७५ पौष २७ शुक्रबार| प्रकाशित २१:१८:oo
विवेकशील नेपाली र साझा पार्टीबीच एकता भएर विवेकशील साझा गठन भएको डेढ वर्षमै फुटेको छ। वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गरिरहेको दलभित्र त्यसबारेको बुझाइ नै फरक परेको भन्दै पूर्व विवेकशील दलबाट प्रतिनिधित्व गरेको एउटा समूहले आज निर्वाचन आयोगमा बेग्लै दलका लागि निवेदन दिएका हुन्।
छोटो समयमै पार्टी फुटको कारण के हो? अबको बाटो कस्तो हुन्छ? लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने समूहमध्येका एक मिलन पाण्डेसँग किशोर दहालले गरेको कुराकानीः
एकता भएको डेढ वर्ष नबित्दै पार्टी विभाजन भयो। किन?
हामीले वैकल्पिक र सुसंस्कृत राजनीति गर्न भनेर एकता गरका थियौं। डेढ वर्षको दौरान वैकल्पिक र सुसंस्कृत राजनीतिप्रतिका हाम्रा बुझाइ नै फरक रहेछन्।
यो हामी दुवै पक्षमा महसुस भयो। त्यसैले एकैठाउँ बसेर वैकल्पिक राजनीति गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्यो। हामी छुट्टिएर राजनीति गर्दा नै हामीले पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्ने र उहाँहरुले पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्ने भएकाले हामीले छुट्टिने निर्णय गरेका हौं।
वैकल्पिक र सुसंस्कृत राजनीतिप्रतिको बुझाइ नै फरक रहेको भन्नुभयो। कस्तो फरक हो?
गराई र बोलाईमा फरक भएको हो। हामीले मूल्यमान्यताको राजनीति भन्यौं। हामीले इमानदारिता र पारदर्शिता भन्यौं, तर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेनौं। त्यसरी व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दाखेरि भोलि सत्तामा पुगे पनि हामीले ‘डेलिभर’ गर्न सक्नेछैनौं। अहिले चलिरहेको परम्परागत राजनीति जुन छ, विवेकशील साझा पनि त्यही बाटोमा हिँडिरहेको महसुस भयो।
उदारहणका लागि, पार्टीका एकजना सदस्य उज्वल थापाले पार्टी गलत दिशामा छ भनेर दस्तावेज निकाल्छन्। पार्टी सदस्यलाई दिन्छन्। त्यसलाई छलफल गराउँछन्। त्यसपछि संयोजन समितिको बैठक बस्छ। त्यहाँ थापाले संयोजन समितिमा होइन, केन्द्रीय समितिमा छलफल गरौं भन्छन्। तर, संयोजन समितिमा उज्वल थापाको दस्तावेज छलफलको एजेन्डा बन्दैन। बरु ६ जना केन्द्रीय सदस्य थप्ने एजेन्डा राखिन्छ। विभागहरु भंग गर्ने राखिन्छ। कतै हामी फोहोरी खेलमा भासिँदै त छैनौं भन्ने लाग्यो।
हामी वैकल्पिक संगठन बनेर भोट ल्याएर दुई/चार जना मन्त्री बन्नका लागि राजनीतिमा लागेका होइनौं। देशको राजनीति बदल्न चाहन्छौं। वैकल्पिक संगठन हुने होइनौं, वैकल्पिक राजनीति गर्न चाहन्छौं। वैकल्पिक संगठन त बन्ला, तर वैकल्पिक राजनीति गर्न सक्दैनौं, गर्दैनौं, ट्र्यापमा पर्छौं भन्ने महसुस भयो। त्यसैले हामी छुट्टियौं।
यस्ता असमझदारी त बिस्तारै छलफल गरेर मिलाउँदै जान सकिन्थ्यो होला नि होइन?
हामीले प्रयास गरेका हौं। सक्दो प्रयास गरेका हौं। तीन महिनादेखि प्रयास गरेका थियौं।
एकथरि थिए, जसले तपाईंहरुलाई राजनीति गरिखाँदैनन् भनेर अविश्वास गरिरहन्थे। उनीहरु पो खुसी हुने भए त?
यो हाम्रो लागि चुनौति हो। हामीले काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। पहिले भन्दा गाह्रो छ, तर जसले काम गर्न सक्छ, उही स्थापित हुन्छ। त्यो स्वभाविक हो।
तर तपाईंले भनेको कुरा जायज नै हो। अहिलेको अवस्थामा आम जनता, मतदाता, जसले हामीलाई साथ दिनुभयो, उहाँहरुलाई दुःख लाग्छ। उहाँहरुलाई म व्यक्तिगत रुपमा र नयाँ बन्ने पार्टीको तर्फबाट के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने उहाँहरुलाई सम्मान गर्न नै हामी यो अवस्थामा आएका हौं।
तपाईंलाई पहिलेदेखि नै साथ दिँदै आएको समूहलाई यो फुटले निराश बनाउँछ होला। के भन्नुहुन्छ?
यसलाई एउटा संघर्षको रुपमा हेरौं। हामीले पद नपाएर वा अन्य स्वार्थ भएर फुटेका होइनौं। वैकल्पिक राजनीतिप्रति हाम्रो बुझाइ फरक छ। भनाइ फरक छ। गर्न खोजेको कुरा फरक छ। यसकारण हामी फुटेका हौं। हामीलाई अलिकति समय दिनुस्, तपाईंहरुको विश्वासलाई मर्न दिँदैनौं। हामीलाई सावित हुनको लागि केही समय लाग्छ। हाम्रा सुभेच्छुकसँग केही समय माग्न चाहन्छौं।
तपाईंहरुको अबको राजनीति कस्तो हुन्छ? तपाईंहरुले भन्ने गरेको वैकल्पिक राजनीतिको ढाँचा कस्तो हुन्छ?
एक शब्दमा भन्दा सुसंस्कृत राजनीति हुन्छ। त्यो भनेको गराई र बोलाई एउटै हुन्छ। जे भन्छौं, त्यही गर्छौं। जे गर्छौं, त्यतिमात्र बोल्छौं। हामी एकदमै हावामा उडाउने सपना बाँड्दैनौं। साना-साना समस्यामा ध्यान दिन्छौं। अहिले हामीले साधारण मानिसको जीवनलाई छुन सकिरहेका थिएनौं।
अब हामी आम साधारण मानिसको जीवनमा थोरै भए पनि परिवर्तन ल्याउने काम गर्छौं। ठूलो पार्टी भएर केही गर्न नसक्नुभन्दा सानो पार्टी भएर सानै काम गरेर अगाडि बढ्छौं। अभियान चलाउँछौं, देशभर संगठन बनाउँछौं।
तपाईंहरु एकै ठाउँमा हुँदा ठूलो राशीमा सहयोग जुटाइएको थियो। देश-विदेशमा रहनुभएका धेरैले तपाईंहरुलाई विश्वास गरेर सहयोग गरेका थिए। त्याे रकम के हुन्छ?
त्यो विवेकशील साझालाई दिइएको हो। त्यो निर्वाचन आयोगले फैसला गर्छ। हामीलाई ज-जसले सहयोग गर्नुभएको थियो, नैतिकताको आधारमा उहाँहरुलाई सोध्नु त पर्छ। त्यसपछि नाम के हुन्छ, चुनाव चिह्न के हुन्छ, पार्टी कार्यालय के हुन्छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले निर्धारण गर्छ।